Ganacsatada Cadaado o diiday bixinta canshuur ay ku soo rogtay Wasaarada Maaliyadda Galmudug. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ganacsatada Cadaado o diiday bixinta canshuur ay ku soo rogtay Wasaarada Maaliyadda...
Ganacsatada Cadaado o diiday bixinta canshuur ay ku soo rogtay Wasaarada Maaliyadda Galmudug.
Magaalada cadaado Waxaa Maanta Inta badan xiran goobaha ganacsiga ,kaddib markii ganacsatada ay ka biya Diideen bixinta lacagaha canshuurta ah oo ay kusoo rogtay Wasaarada Maaliyadda Maamulka Galmudug.
Wararka ayaa sheegaya Ganacsatada Magaalada Cadaado ayaa waxaa ay dhigeen dibadbax ay uga soo horjeedaan lacagaha ay kusoo rogtay Wasaaradda Maaliyadda Galmudug, iyaga oo inta badan xiray goobahooda Ganacsiga.
Previous articleAskari goor dhowayd lagu dilay Suuqa Bakaaraha magaalada Muqdisho
Next articleTurkey oo sheegay in uu diri doonto markabka gaaska Sahmiya badda Greece,
Doorashada in waqtigeeda ku dhacdo waa sharci Dastuuri ah